ट्रम्प प्रशासनबाट महिला अधिकार जोखिममा छ – बिष्णुमाया परियार, अधिकारकर्मी « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिरुद्ध अमेरिकाका सडकहरुमा लाखौंले प्रदर्शन गरेका थिए । महिला मार्चमा नेपालीहरुको सहभागिता पनि उल्लेख्य रह्यो । खासगरी अमेरिकामा रहेका कैयन नेपाली महिलाहरु मार्चमा सहभागी भए , उनीहरुलाई साथ दिए कैयन नेपाली पुरुषहरुले पनि । वासिंटन डिसी, न्युयोर्क, न्युजर्सी लगायतका स्थानमा भएका प्रदर्शनहरुमा नेपालीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
न्युयोर्कमा नेपाली र नेपाली भाषीको अधिकारका लागि कृयाशिल संस्था अधिकारकी नर्बदा क्षेत्रीले डिसीको महिला मार्चमा सहभागी हुन पाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी छिन् । त्यस्तै न्युजर्सीको महिलामार्चमा सहभागी अधिकारकर्मी बिष्णुमाया परियारले पनि डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा महिला अधिकार जोखिममा रहेको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी हुनु परेको बताइन् । उनैसँग गरिएको कुराकानी ।
महिला अधिकारको लागि अगाडि मानिने अमेरिकामा महिला अधिकारका लागि किन प्रदर्शन गर्नुपरेको हो ?
जतिसुकै महिला अधिकारमा अगाडि भनिएपनि यसपटकको चुनावी परिणामले वास्तविक चित्र देखाइसकेको छ । महिलाहरु जतिसुकै अगाडि बढेको भनिएपनि अझै पनि अमेरिकामा भेदभाव रहेको कुरा पुष्टी भएको छ । यो सोंच्दै नसोंचेको हो । त्यसैले महिला अधिकारका लागि अझै पनि अमेरिकामा धेरै गर्न बाँकी रहेको छ ।
महिलामार्चमा तपाई किन सहभागी हुनुभयो ?
म सुरुदेखि नै महिला र अल्पसंख्यकको अधिकारका पक्षमा रहदै आएकी छु । यसपटक वासिंटन डिसीमा ठूलो प्रदर्शन भएपनि हामीचाँही न्युजर्सीको क्यापिटलमा गएर महिला मार्चमा सहभागी बन्यौं । यो ऐतिहासिक प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउँदा र ऐतिहासिक परिघटनामा समावेश गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ । त्यहाँको आन्दोलन हेर्दा र भाषण सुन्दा निकै उत्साहजनक अवस्था थियो । अधिकारका लागि भइरहेको यो आन्दोलनमा सहभागी हुँदा जीवनकै फरक अनुभव भयो । समयमा नै सुरु भएर समयमै सकियो । मेरो जीवनकै सबैभन्दा धेरै प्रेरक कार्यक्रम थियो त्यो ।
त्यो त इतिहास नै देखाएको कुरा हो । सुरुदेखि नै महिलाप्रतिको ट्रम्पको रवैया र अपमानले यो पुष्टी गरिसकेको छ । सार्वजनिक रुपमा नै महिलाप्रतिको ट्रम्पको दृष्टीकोण आइसकेको छ । महिला, आप्रवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यकहरुप्रति ट्रम्पको नकारात्मक धारणा रहेको छ । शक्तिमा नआएको अवस्थामा त महिला, आप्रवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यकहरुप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने ट्रम्पले शक्तिमा आइसकेपछि के गर्लान् भन्ने त्रास व्यप्त छ । र ट्रम्प प्रशासनबाट अधिकार जोखिममा रहेको छ ।